Sabayon Linux. | Laga soo bilaabo Linux
simonorono | | La cusboonaysiiyay 16/12/2014 06:01 | Qaybinta, GNU / Linux
Salaan kadib, mudo dheer ayaan ahaa akhristayaasha TanLinux waxaanan u maleynayaa in la joogo waqtigii aan wax ku biirin lahaa blogga, sidaa darteed waxaan go aansaday in aan wax ka qoro diiraha aan hada isticmaalo, Sabayon Linux.
Kuwa aan aqoon Sabayon waa qeybinta GNU / Linux oo ay abuurtay Fabio Erculani, oo ku saleysan 'Gentoo', wuxuu dhaxalsiiyaa maareeyaha xirmooyinka ku saleysan ilaha Portage qalabkiisa soo bixida cajiibka ah. In kasta oo wax walba aysan ahayn il, haddana Sabayon waxay kaloo leedahay Entropy, iyo qalabkeeda isbarbar dhig (qaabka qoraalka) iyo adag (interface interface), oo bixiya baakado si toos ah looga soo ururiyey geedka Portage, oo bixiya nidaam deggan, oo cusbooneysiin toddobaad kasta ah. Ha iloobin inaad sheegto (horeyba waan u sameynayaa: D) in Sabayon ay tahay mid sii deynaysa, sidaa darteed marka la rakibo, rakibid buuxda ha la sameynin (Laakiin horay waad u ogayd taas).
Sabayon waxaa lagu heli karaa deegaanno kala duwan oo desktop ah, oo aad dooran karto markaad soo degsaneyso ISO, oo aad si fudud wax uga beddeli karto ama aad u rakibi karto dhowr adigoo isticmaalaya maareeyaha xirmada.
Sabayon waxaa loo qaybiyaa tiro badan oo sawirro ISO ah:
SpinBase x86 iyo amd64 (Dhammaan ISO-yada kale waxay ku saleysan yihiin tan, waa deegaan ugu yar, oo leh kaliya terminal iyo maareeyaha xirmada).
CoreCDX x86 iyo amd64 (Deegaanka ugu yar oo leh Fluxbox oo ah qaab muuqaal ah).
ServerBase x86 iyo amd64 (oo la mid ah SpinBase laakiin ku shaqeeya koronto habeysan server).
Gnome x86 iyo amd64.
KDE x86 iyo amd64.
XFCE x86 iyo amd64.
LXDE x86 iyo amd64.
Iyo ISO kale oo loo habeeyay inay ka shaqeeyaan qaab dhismeedka ARM.
Rigo waa iskuxirka garaafka ee Entropy, wuxuuna iskudayaa inuu ahaado mid fudud sida Google, waa maxay sababta tan? Yaan aqoon sida loo isticmaalo mashiinka raadinta ee astaamaha ah?
Rigo wuxuu leeyahay astaamo badan oo nolosha u fududeyn doona adeegsadaha, kooxaha codsiyada, muujinta barnaamijyada rakibay, hagaajinta nidaamka adeegaha, ilaa maaraynta keydadka.
Bakhaarka Entropy sidoo kale waxaa laga heli karaa webka (waa bilaash, ma fahmin dukaanka), oo aad ka heli karto Halkan.
Sabayon Linux waa nidaam aad u xasiloon oo kooxdeeda horumarinta ay si adag ugu shaqeyso inay u keento dadka isticmaala khibrada ugu fiican, marka lagu daro raacitaanka moodooyinka KISS iyo OOTB, waa nidaam fudud oo la adeegsado taasna waxay la timaadaa barnaamijyo badan oo isticmaalka guud loo isticmaalo asal ahaan (Player muusikada waxay kuxirantahay desktop-ka aad dooratay, LibreOffice, xitaa GCC).
Waxaan kugula talinayaa inaad tijaabiso Sabayon, kama qoomameyn doontid. 🙂
Screenshot qaar ka mid ah:
Bogga rasmiga ah.
Fagaaraha rasmiga ah.
Sabayon on Google+
Kooxda rasmiga ah ee Facebook
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Linux Sabayon.
Wax ku darsasho aad u wanaagsan, waxaan isticmaalay sabayoon ilaa ATI ay rabto, runtuna waa inaan aad ugu xiisay isaga, tabarucaad ahaan waxaan dhihi karaa Sabayon wuxuu ku koraa boodbood iyo xuduud, iyadoo sii deyn kastaa ay aad u korayso oo si wanaagsan uga hadlaysa shaqada bulshadeeda ayaa qabata.
@conandoel qiyaano ka bixida sabayon XD
Waxaan la waalanahay Sabayon Xfce. Sida ugu fudud ee Ubuntu, laakiin ku saleysan Gentoo. Cabashada kaliya ee aan qabo ayaa ah cusbooneysiinta kernelku waa xoogaa shaqo ah (baakadaha kernel way kala duwan yihiin).
Waxa kale oo xusid mudan in bugtacker-ka aad ka dalban karto noocyo baakado ah oo aan ku jirin Sabayon laakiin ku jira Gentoo (markaa waad iska ilaalinaysaa inaad isticmaasho sawir). Waxaan ku sameeyay nooca 1.3.1 ee Qupzilla
Fariin wanaagsan, runti waxaan isticmaalay Sabayon waxayna iga dhigeysaa mid qurux badan oo ka sii badan maxaa yeelay waxay sii deyneysaa sii deynta oo aan jeclahay, kaliya waxaan heystaa dhowr xanaaq oo leh waana:
1 in dulucda tilmaamuhu uusan iswaafaqsaneyn (mararka qaarkood waa mid cad oo fool xun marna waa dulucda tilmaamaha Adwaita)
2 oo adeegsata softiweerkii hore (tusaale Gnome 3.2, horeyba 3.4-2 iyo ugu dhakhsaha badan 3.6)
waxaa jira wax fiican oo aad dhihi kartid waan jeclahay Sabayon
Ma awoodin inaan rakibo, log ayaa muujinaya inaanay la jaan qaadi karin wadayaasha kaarka ATI, xal ma leeyahay?
Waxaan haystaa dhibaato la mid ah tan Mr Linux, xitaa ma heli karo DVD-ga tooska ah si aan u kiciyo. Ma jiraa qof yaqaan wax xal ah?
Ku jawaab galda
kaarkuna waa ...?
Xaaladdayda, ATI Mobility Radeon HD 3650
Waxaan awooday kaliya inaan ku tijaabiyo Sabayon qaab toos ah, maaddaama Anaconda igu tuurayo qalad markii aan gaaro kala qaybsanaanta diskka oo uusan ii oggolaanayn inaan sii wado. laakiin wali sidan, waxay u dhaqantaa si dhakhso leh oo deggan. Waxaan u maleynayaa in haddii hal maalin aan ka tago Chakra, aan isku dayi doono distoorkan, haa, hehe, KDE ama Openbox.
"KDE ama Openbox"
Waxaad leedahay dhadhamin laba-cirifood ah.
haa waad dhihi kartaa !!!!
Beddelka ayaa ah in la sameeyo qormooyinka ka hor, oo anaconda kaliya la doorto qodobbada buuraha, ama ugu yaraan waa sida ay yeeleen markii la isticmaalayay Sabayon.
taasi waxay ahayd si sax ah talobixinta aan ku helay anigoo hubinaya shabakada. inkasta oo markaa aan horey u sii rakibey Chakra.
Maqaal aad u fiican, waa qaybsi aad u wanaagsan oo awood badan.Waxay ahayd mid aan ugu jeclaa illaa iyo Ati ay tiri waqtigii la joojin lahaa
Bugtracker waa wax aad waxtar u leh oo ay tixgeliyeen kooxda Sabayon, aniga qudhaydu waxaan ka codsaday inay ku soo kordhiyaan Cinnamon meelaha lagu keydiyo, toddobaad ka yarna waa la qabtay.
Xaqiiqdii tani waxay ahayd wixii ku dhacay ATI (xiriiriye uu bixiyay Rigo laftiisa oo sharaxaya xaaladda): http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_catalyst_legacy2&num=1
Maqaalkani si gaar ah ugama hadlayo sida loo cusbooneysiiyo kernel-ka, laakiin aad ayuu faa'iido u leeyahay tan iyo markii ay bixiso tabo yar si looga faa'iidaysto: http://wolf911.us/wgo/?p=699
Errata: «Kooxda Sabayon»
Waxaan iska dhigay ATI, in kastoo ……
Ku jawaab argenauta
Waan isku dayay, waxaan ku sameeyay nooca 'Gnome Shell', runtii waan ka helay.
Waxa aanan jeclayn ayaa ah in markasta oo aad rakibto ay tahay inaad sameyso labo shay si ay u amarto keydadka mana xasuusto wixii kale ee ay ahayd mid gaabis ah oo daal badan, iyo inay kugu soo dejineyso 2 saacadiiba. ...
Markii aan banaanka soo saaray waxaan u arkay mid aad u deggan oo awood badan.
Sidee tahay arrinta kernel? Ma aha wax fudud sida marka ubuntu ama fedora ay soo dejinayaan cusbooneysiin iskeed isu rakibaysa, dib u bilaabaya oo horeba u shaqaysay?
Noocyada waaweyn ee kernelku waa xirmooyin ka madax bannaan noocyada kale, taas oo ah, Sabayon xirmada sys-kernel / linux-sabayon: 3.5 waa xirmo gebi ahaanba ka duwan (kumana xirna hal dhinac ama mid kale) sys- xirmo kernel /linux-sabayonPress.3.4.
Gudaha Sabayon si aad u cusbooneysiiso nooca sare ee kernel-ka waa inaad si cad ugu sheegtaa maareeyaha xirmada, waxaadna heysataa noocii hore (oo aad tirtiri karto markii midka cusub la tijaabiyo) haddii ay dhacdo in kernelkan cusubi uusan la jaan qaadi karin qayb ka mid ah kombuyuutarkaaga.
Khasaaruhu waa inaad ku rakibtaa xirmooyinka ku tiirsan kernel gacanta sidoo kale. Ex: virtualbox-marti-ku-daris: 0,3.5.0-sabayon.
Iyo cusbooneysiin gooni ah ayaa loo hayaa nooc kasta oo weyn oo kernel ah. Taasi waa, labada nooc ee 3.4, 3.5, 3.0 iyo xitaa 2.6 waxay sii wadaan helitaanka cusbooneysiinta.
Gudaha Sabayon waa inaad ku beddelataa guntinta gacanta adoo adeegsanaya qalabka kernel-switcher, runti waa wax aad u fudud. Waxaan u maleynayaa inaan xasuusto inay sidan tahay: liiska kernel-switcher (wuxuu ku siin doonaa liistada kernels-ka la heli karo) ka dibna waxaad fulineysaa furaha kernel-switcher (halkan waxaad dhigtaa kernel-ka la soo xulay) iyo voila si toos ah ayey u rakibi doontaa. Marka tan la eego waa in laga fogaado dhibaatooyinka isticmaalayaasha markaad rakibayso kernel cusub.
Intaas kaliya maahan. Sidoo kale waa inaad rakibataa modullada ay kernel u isticmaasho
Waxaan ku sameeyay anigoo isticmaalaya kernel-switcher (waa habka lagu taliyay ee ku saabsan wiki) waligana wax dhibaato ah igama helin. Ma aanan ogeyn inay jirto wado kale oo aan ku sameeyo.
Laakiin muxuu u noqon karaa otomaatik sida fedora ama ubuntu? Sababtoo ah distro-kan ayaa ka badan "pro" oo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad doorato kernel aad isticmaasho iyo in kale?
Khibradeyda gaaban ee ku saabsan Linux, cusbooneysiinta otomaatiga ah ee kernel badanaa waxay bixisaa dhibaatooyin (waxaa la iga tagay wifi la'aan, kumbuyuutarka ma shaqeyn, iwm.) Sidoo kale Sabayon waxay isticmaashaa darawallo lahaansho sidaas darteed cusbooneysiinta kernel ayaa kaa tagi doonta adiga oo aan lahayn jawi muuqaal ah ( Waxaan u maleynayaa) iyo sidaan waxaad ku dooran kartaa nooc xasilloon adoo saxaya cilladaha suurtogalka ah ee kernel-ka cusub. Waxaan u maleynayaa Gentoo sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad doorato nooca xirmooyinka aad rabto.
Waxaan uguyaraan isticmaalay ubuntu iyo fedora in mudo ah iyo cusbooneysiinta maalinlaha ah ama waxkasta oo ay aheyd markii aan cusbooneysiiyey kernel-ka, weligood ma jabin mana joojin shaqada 🙂
Waxyaabaha cajiibka ah waxay noqon lahaayeen haddii aysan iyaga siin lahayn, waxaan ka hadlaynaa kernel, qaybta aasaasiga ah ee nidaamka!
Waa wax lagu qoslo sida mararka qaarkood GNU / Linux aan si fudud ugula hadalno waxyaabaha ku saabsan nidaamka sida kernel, qalbiga iyo salka nidaamka, sababtoo ah waxaan nahay (xun?) Waxaa loo adeegsaday in aan soo uruurino jirkeena, ku badalno sida aan doono iyo asal ahaan waxkastoo aan qabano waxaan rabnaa, CAW! Taasi waxay la hadlaysaa cajiibka farsamada ee ah GNU / Linux !!!
Tag taas ku samee Windows, MacOS, Minix, Plan9, FreeBSD, wax alla wixii aad rabto, dooro ... MA JIRTO, lama malayn karo !!! Oo kulul-beddelashada firida? Si toos ah u qabso? Ku soo noqoshada kernel kale oo ilaalinaysa goobta isticmaale-yaasha!? WTF !! Hadday wax uga sheegaan tan "injineerada iyo horumariyeyaasha '' takhasuska u leh Windows-ka 'waxay si run ah ugu sheegi doonaan: FURAN, HEH, HA IGU SIIYAAN FIKRAD CILMI AH !!
Wow, runtu waxay tahay inaan ka fekerayay isku dayga distoorkan muddo dheer laakiin si buuxda uma aanan hubin ... Waxaan u maleynayaa inaan rakibi doono waqti yar si aan u arko sida ay wax u socdaan! 😀
Sabayon wax badan ayey ku soo korortay qaybteeda 9aad, ka hor intaan ficil ahaan loo isticmaali karin 😛
Sabayon 9 KDE SC waxaan ka helay:
1. jawi qurux badan.
2. Rigo waa heer sare… Waxaan ula jeedaa GUUL.
3. Inaan si buuxda ula jaanqaado Gentoo waxay iga badbaadineysaa rakibida Gentoo ka dibna qeybinta inteeda kale laakiin wali waxaan heystaa dabacsanaanta hooyada (ama aabaha!) Distro iyo dhammaan awooda soo bixida + Portage. Maaddaama aanan aheyn qof saliid ah, ma aqaano sida ay macquul u tahay fikraddu, laakiin waxay ila muuqataa inay aad u macquul tahay in Sabayon iyo Funtoo la waafajiyo in kasta oo halkaan laga soo galayno biyo mugdi ah ...
4. Ku dhowaad si buuxda u shaqeynaya (eeg CONS), ma aanan tijaabin inta kale ee desktops-yada laakiin haddii ay leeyihiin kalgacal la mid ah nooca KDE SC waxaan tuhunsanahay inay fiican yihiin.
5. Waxay si fiican ula shaqeysay labada Motherbood ee laptop-ka oo qaab toos ah u socda, Intel iyo ATi Mobility - qeybta dambe iyadoo la adeegsanayo moduleka RadeonHD ee 2D ku tirtiraya Catalyst iyo 3D [Google Earth] oo si sharaf leh isku difaacaysa. .
1. CAAFIMAAD: Sabayon marwalba way cusleyd, diro waxay dareemeysaa culeys (ka duwan Arch oo duula aadna u dhaqsa badan) iyo Sabayon 9 KDE SC iyana kama reeban.
2. Si ka duwan Ubuntu, openSUSE ama Fedora, ma aysan ogaan shaqeynta badan, yacni, wey ogaatay laakiin ma daabici karo mana baari karin, waxaa suuragal ah baaritaanka dhibaatadan in la xalin karo laakiin hadda ma ahan khibrad buuxda oo ka baxsan-sanduuqa sida saddexda kale distros ee aan ku magacaabo bilowga.
3. Waxa kale oo aan dhib kala kulmay rakibayaaha markii aan kala baxayay, ma uusan jeclayn sidaan horey ugu qaybiyay diskigayga GTP / ext4 oo aanan rakibi karin - mar dambe ayaan ku sameeyay VirtualBox VM oo si fiican ayuu u shaqeeyay.
4. Nooca KDE ee loo yaqaan 'Sabayon', oo keydinaya arrimo badan, ayaa ka wanaagsan kan KDE ee Mint o_O
Sida ku xusan maqaalka, Sabayon shaki la'aan waxay wax si fiican u qabaneysaa, waxay kusocotaa wadadii ay ugu noqon laheyd ikhtiyaar dhab ah isticmaaleyaasha cusub ee GNU / Linux.
Waxaan u imid inaan u maleeyo in qaansada ay ka cuslaatay, laakiin ... waa inaad tixgelisaa wax, qaanso waxaad kaliya rakibineysaa waxaad rabto, sabayon in iso waxay leedahay waxyaabo badan si aad wax walba ugu sameyso cd live ... xitaa waxay leedahay flash horay loo rakibay, sidaa darteed, Waxay noqon laheyd mid isbarbar dhiga hadii aad rakibtay dhamaan baakadahaas qaansoleyda waana sameeyay waana ay isku mid ahaadeen ... in dhanka kale, dhanka kale kernelka, iniinku uusan aheyn sida kakan sida ay yiraahdaan, furo Rigo, waxaad raadineysaa Linux-sabayoon waxaadna heleysaa ubaxyada, waad rakibaysaa, dib ubilaabaysaa si aad uga rarto walxaha, iyo voila, sabayon si toos ah uma cusbooneysiiso kernel-ka si nidaamku u xasillo, si looga fogaado jabinta nidaamka dhammaan isticmaaleyaasha, laakiin waxay baakadaha ku ridaan keydadka haddii aad ka mid tahay kuwa aad jeceshahay inaad haysato ugu dambeeyay, waa wax laga wada hadlo maxaa yeelay waxay ku tusaysaa halista ay leedahay 'distro', waxay si dhab ah wax u qaataan, iyagoo rog rogaya, waa inay bixiyaan xasilooni waana taas waxa ay qabtaan ... Waxaan ku dhowaa 2 sano anigoo ku isticmaalaya maqui desktop-ka (laptop-kaygu wuxuu leeyahay Gentoo) waxaanan dhihi karaa oo kaliya in nidaamkeygu jebiyey 1 jeer oo keliya 10 daqiiqo ka dib barta 'distro' waxay sharraxeen wixii dhacay iyo sida loo saxo.
Waan saxay, waxaan u maleynayay in Sabayon ay ka culus tahay
sxb, werigu waa sidee? ma sababtoo ah iniinyadu waxay bilaabaan iyaga ka hor intaan si fiican loo tijaabin?
su'aashu waxay ku socotaa q ubuntu, ama fedora, waxay cusbooneysiiyaan kernel waligeyna wax dhibaato ah igama qabin, marwalba way cusbooneysiiyaan, dib u bilaabaan waana diyaar.
Maaha inay iyagu bilaabaan ka hor intaan si fiican loo tijaabin, waxay ka sii badan tahay haddii diirku keeno isbeddello aan ku habboonayn qalabkaaga, iyo si aad ugu laaban karto tii hore haddii ay taasi dhacdo.
aan dhahno ... Waxaan ku kalsoonahay fedora in haddii aad geliso xirmo ay tahay mid deggan oo la tijaabiyay.
iminkana igama dhicin. Halkii sabayon sideen u sameeyaa malaha waan cusbooneysiiyaa oo distoorku wuu dhintaa?
Taasi maahan, waxay leeyihiin kernel xasilloon, dhab ahaantii xirmooyinka kahor intaan la cusbooneysiinin waxaa lagu sameeyaa tijaabooyin "limbo" taas oo ah bakhaarka keydka, laakiin xirmooyinka halkaa kuyaala ma sii jiraan wax ka badan 15 maalmood, intaas ka dib, waxaa loo gudbiyaa keydka xasiloon, kaliya hadii ay tahay kernels ma cusbooneysiiyaan naftooda, maxaa yeelay mararka qaar isticmaalehu ma rabo cusbooneysiinta dhibaatooyinka jira awgood, xitaa adigu hadda waad rakibi kartaa, sabayon 9 oo rakibi xarkaha 2.6.38 iyo hadda .. . taasi wali waxay ku jirtaa keydka xq xerooyinka cusub hada wixii ka dambeeya taageero uma lahan mishiinadii hore, mararka qaarna qofku wuxuu rabaa inuu badbaadiyo dinosaurs aan keydinay, waxaan u iri maxaa yeelay kiiskeyga gaarka ah waxaan haystaa pentium II, III, IV. iyo mashiinada Celeron, taasina waa mid waxtar ii leh o ugu yaraan aniga ahaan markaan rabo inaan dib u isticmaalo mid ka mid ah kuwa ... cusboonaysiinta kernel-ka waxaa ku filan a «equo search linux-sabayon» oo kaliya in la arko noocyada kernel ee la heli karo, ka dib markaan go’aansado mid aad sameyso «equo rakibso Linux-sabayon-3.5» adigoo u maleynaya waxaad rabto3.5 waana taas ... si kastaba, sidaan idhi, waa arrin la doonayo cusbooneysiintaas, inta kale ee xirmooyinka ah waa otomaatig otomaatig ah, ..
Aad baad u mahadsantahay! hada hadii ay cadahay 🙂
@oroxo wali waa iga yaabiyey sida wanaagsan ee noocani udambeeyay ee KDE SC u shaqeeyo, sida iska cad waxaan dareemayaa «Scannia» agtayda Porsche, laakiin kahor intaysan noqon cagaf cagaf jaban! xD
Man, sida ugu badan ee aan la isticmaali karin kahor 9 version. Waxaan isticmaali jiray xagaagii la soo dhaafay (waxaan rakibay nooca 6.0 markaa), sidoo kale dhadhanka KDE, khibradduna way fiicneyd. Kaliya muuqaalka Mandriva 2011 iyo jaceylkeygii hore ee aan la lahaa distoorkaas ayaa ahaa waxa igu kalifay inaan ka takhaluso Sabayon.
Khasaaraha kaliya ee aan arkay wuxuu ahaa in maareeyaha xirmada uusan ii oggolaan doonin inaan ka go'aansado serverka asalka ah ee aan ku soo dejinayo xirmooyinka (waxay ahayd xanuun sababtoo ah midka hore had iyo jeer wuu yara yaraa), iyo arrinta ku saabsan isdhaafsiga, oo aan sidaa loo hanuunin iyo aad u fudud sida OpenSuse, Mandriva ama Ubuntu.
PS: Contra number 4 maahan wax qandaraas ah, sax? xD
Maya maya, dabcan! Sabayon 9 KDE SC waxay garaacaysaa Linux Mint dhowr dherer - waana i garaacaysaa maxaa yeelay Mint waxay ku faantaa inay tahay mid nadiif ah oo wax walba si fiican u qabata!
Hagaagna, waxaan kuhelay waxqabad farabadan oo kaliya markaan rakibo hplip, wuxuu daryeelaa sameynta koobabka si loo aqoonsado, kuwa kale qaar keli ah waxaan ka raadsadaa internetka nambarka daabacaha iyo koobabka mar walbana waxaan helaa xal
Sidee ayey isula jaan qaadayaan Sabayon iyo Gentoo? Haddii aan rabay inaan ka baxo Sabayon una tago Gentoo, ma ku filan tahay inaan is waydaarsado ilaha?
Sabayon waa Gentoo waa fududahay in la rakibo, sidoo kale waxay leedahay maareeyaha xirmooyinka laba-geesoodka ah, xitaa waad isticmaali kartaa Portage (soo bax), ka dibna si aad u hesho iyo Entropy oo u wada shaqeynaya waxay wadaan "equo rescue spmsync".
Xitaa haddii aad rakibatid 'Gentoo', ku dar 'Sabayon overla' oo rakibi 'Entropy', waxaadna u qurux badneysaa Sabayon-kaaga 'Gentoo'.
Waan ka xumahay Errata. Ku socota Gentoo ee ku taal Sabayon.
Waxaan ka fekerayay sida loo sameeyo kaliya caksiga. U beddel Sabayon ilaa Gentoo. Ma la samayn karaa iyada oo aan wax la qaban, ama qaar ka mid ah taabashada waaweyn ayaa loo baahan yahay in la sameeyo?
Waa horeba, Sabayon waa sahlan-rakibida Gentoo oo waliba leh maamule xirmo binary ah.
Marka haddii aan ka saaro ilaha laga soo xigtay sabayon, waxba ma dhacaan sax?
Gabi ahaanba ma aha.
OK mahadsanid. Waqtigan xaadirka ah Sabayon waxay ku jirtaa meesha ugu sareysa liistada OS si aan isugu dayo.
In kasta oo aan 1 jeer uun u isticmaalay dhawr sano ka hor (Dib) waxay dhadhan fiican u reebtay afkayga inkasta oo aanan ahayn wiil taageersan Sabayon, waa inaad fursadda u qaadataa inaad tijaabiso 🙂
Waxaan u baahanahay inaan ku daro inkasta oo aan hadda isticmaalo Arch, waxaan kula talinayaa Sabayon waadna ku mahadsan tahay faahfaahinta 😀
Waxaan sidoo kale u isticmaalaa Sabayon oo leh KDE runtiina waa wax aad u fiican Markii aan raadinayay RR distro leh KDE tani waxay ahayd ikhtiyaarka saxda ah. Xaqiiqdii waxaan ku beddelay LMDE-kayga sidii 'saldhig' distro kombuyutarkayga ... hadda qayb kale waxaan isku dayaa Kubuntu.
Waa hargab aad u horumarsan, maareeyaha RIGO waa heer sare, falsafadiisa u diyaar ahaanshaha adeegsiga ayaa ugu fiican, waa xasiloon tahay, shaqeyneyso oo aad dareere u tahay. Iyada oo la adeegsanayo desktop-ka KDE waa wax la jecleysto, weligey dhibaato kuma qabin. Ahaanshaha sii deynta waa faa iidadeeda ugu weyn.
Aniga aragtidayda cillada kaliya ee ay leedahay ayaa ah inay gaabis tahay bilaabida iyo xiiritaanka ... marka loo eego kuwa kale ... Wax fikrad ah kama haysto sababta ay sidaas u noqotay.
Waa inaan kugula taliyo qaybintaan, waa tan ugufiican ee aan hada haysano markay tahay GNU / Linux, cidina waqti iskama lumin doonto iskudaygeeda iyo rakibideeda. Waxaan si gaar ah ugula talinayaa KDE!
Salaan kadib, adigoo ah "diyaar in la isticmaalo" distro, waxay ka bilaabataa adeegyo badan nidaamka bilawga, taasi waa sababta ay xoogaa gaabis u tahay, waa inaad kaliya ka takhalustaa kuwa aadan adeegsan.
Waxaad haysaa qalabyada: cusbooneysiinta, cusbooneysiinta, adeegga rc iyo xaaladda.
la diriray dijo
Waan ku faraxsanahay sabayoonkeyga aan la leeyahay KDE, waxaan u maleynayaa inay tahay disto lagula taliyay kuwa raadinaya sii deynta sii daynta iyo in ka badan "otomaatig" ka badan qaansada.
Kaliya hal dhibaato ayaa i haysata: Ma dhejin karo xperia mini pro-ga oo sida muuqata xalka ayaa ah in wax laga beddelo dhowr qaabeyn oo ku jira kernel (wali ma haysto aqoon igu filan waqtigana waan ku gaabiyey)
Ku jawaab luchoz
luchoz, maxaad dooneysaa inaad wadaagto feylasha? Waxaad isticmaali kartaa samba, ama Airdroid. Waxaan u idhi, maxaa yeelay waa sidaan u haysto, inaan haysto Xperia.
Si loo helo xusuusta gudaha ee aad tidhaahdo?
Taasi waa sax, waqtigan xaadirka ah waxaan isticmaalaa airdroid, laakiin waxaa jira waqtiyo aan jeclaan lahaa inaan xiriir toos ah ku yeesho fiilada (si loo waafajiyo muusikada ama xog badan isla waqtigaas).
Sida muuqata waa dhibaato sida sabayonku ugu arko taleefanka gacanta:
[1421.669169] usb 2-1: aaladda USB-ga xawaaraha buuxa leh lambarka 4 adoo adeegsanaya ohci_hcd
(1421.688160) usb 2-1: kuma socoto xawaare sare. ku xirmaan xarun xawaare sare leh
[1421.700147] usb 2-1: Qalabka labada-doorka OTG ee dekedda aan HNP ahayn
[1421.702145] usb 2-1: ma dejin karo qaabka HNP: -32
Xitaa kuma xirna habka kaydinta tirada oo fdisk -l ama lsusb midna waxba iima soo celiyo.
Dhinaca kale waan ogahay inaysan dhib ku aheyn fiilada ama taleefanka maxaa yeelay miqmo wuxuu ka shaqeeyaa dhibaato la'aan Arch
"Waan ku faraxsanahay sabayonkeyga aan la leeyahay KDE, waxaan u maleynayaa inay tahay disto lagula taliyay kuwa raadinaya sii-deynta rikoodhka iyo" otomatiga "ka badan qaansoleyda."
Ilowday: iyo qaansoley isticmaalayaasha KDE oo sababo jira awgood nidaamkooda looga faa'iideystay oo aan ka taxaddarin keydinta keydka.
Uguyaraan ilaa aad geesinimo qaadato - oo aad dareento sida oo kale! - si loogu rakibo Arch oo leh KDE mar labaad oo aad u habeyso dhammaan distro, Sabayon waa bedel weyn 😀
(Kahor intaadan ii sheegin, fikradda Chakra waa wanaagsan tahay laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay tan ugu murugsan ee aan waligay isku dayay, kana xun Kubuntu, wax fikrad ah kama haysto sida ay u maareeyeen iyagoo adeegsanaya Arch Linux saldhig ahaan).
Sidee ayay dhibaatada ugu xalliyaan kaarka ATI, in markaan sameeyo cusboonaysiinta ugu horreysa aan haysto shaashad madow.
Ku jawaab feeder
shaashad madow ma leh, laakiin shaashad buluug ah, laakiin ma shubanayso x, xalka ma jiraa?
Haddii aadan u baahnayn qaybaha lahaanshaha - oo ay u badan tahay inaadan u baahnayn haddii aadan isticmaalin ciyaaraha 3D ama qalabka sida Blender ama Maya - Waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho furitaanka 'RadeonHD' ee sida ugu fiican u shaqeynaya mana yeelan doontid mid ka mid ah dhibaatooyinka jira. oo leh Hannaan.
Sidoo kale markaad isticmaaleysid RadeonHD waad kicin kartaa KMS (Kernel Mode Setting) si aad uhesho xal fiican oo ku saabsan boosteejadaada tty, beddel noocyada (tusaale Terminus ama Dina), iwm.
Hello MSX, waan ka xumahay daahitaanka jawaab celinta, kaarka garaafyada ee aan haysto waa ATI Radeon 3200 HD, dhibaataduna waxay tahay markii la cusbooneysiinayo goobaha keydka, darawalka iska leh ayaa i qaadaya shaashaduna waa madow, waxaan sameeyay isbadal dhowr ah, Waxaan aaday xorg, waxaan u badalay fglrx radeon, ka dibna waxaan awooday inaan galo desktop-ka, laakiin ma ihi 3d acceleration firfircoonaan, runti ma aqaano talaabooyinka la qaado, hada waxaan ku jiraa cinnarch, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan rakibo Sabayon.
Waad salaaman tihiin asxaabta Linux, waan ka xumahay inaan aqristo kulligiin, maxaa yeelay waxaan kaliya siiyaa gurguurteyda ugu horreysa adduunka cajiibka ah ee Linux. 2 maalmood ka hor, anigoo dhex wareegaya shabakada oo aan ka careysanahay isticmaalka daaqadaha iyo akhris aad u badan, waxaan la kulmay Sabayon 11 distro. Waxaan doonayay inaan in mudo ah u wareego Linux, laakiin waad ogtahay in isbadalku mararka qaar adag yahay, isla markaana aqoon la'aan uu u leeyahay Linux xitaa intaas ka sii badan, laakiin waxaan go'aansaday inaan qaado tallaabada waxaanan halkan wax uga qorayaa Sabayon 11 oo aan halkan kuugu soo qorayo. Waxaan jeclaan lahaa runta inaad xoogaa caawimaad ah i siiso, sida haddii aad ogtahay meel ay ku jiraan macluumaad ku qoran Isbaanishka oo ay ku jiraan buugaag iyo waxyaabo la mid ah oo lagu barto laguna barto Sabayon 100%. Arrinta labaad, waxaan ku rakibay sanduuq meeris ah 'Sabayon 11' (oo waxaan dareemayaa inaan mugdi ku jiro oo wali waxaan isticmaalaa daaqado aan Linux ku qoyso) laakiin ma sameyn karo VBoxGuestAdditions inay shaqeeyaan, tan dambe ayaa i siineysa xanuun badan madaxa oo xal u heli maayo. Runtii waan qadarin doonaa taageerada aad isiin karto. Dhammaantiin waad salaamantihiin waana mahadsanyahay.
Ku jawaab maskaxda
Lammaane sidoo kale waxaan u isticmaalaa Sabayon, oo ku saabsan VirtualBox kan kaa caawin kara waa Conandoel, wuxuu wax ka ogyahay Sabyon sidoo kale waxaan doonayay inaan wanaag ku muujiyo Windows-ka wuuna iga caawiyay arrinta'boxbox ', ka raadi wejiga sidii koandoel ama la xiriir IRC
Angel Alexander dijo
Miyuu jiraa qof garanaya sida loo rakibo / loo soo ururiyo sooo duug ah foornada hadda jirta sidan oo kale?
Jawaab Angel Alejandro
Aynu mar labaad isku dayno sabayon ...
Ku jawaab Angel Sanchez